Sawirro: Halis ka dhalatay waddooyinka dhawaan la dayactiray ee JOWHAR - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Halis ka dhalatay waddooyinka dhawaan la dayactiray ee JOWHAR
Sawirro: Halis ka dhalatay waddooyinka dhawaan la dayactiray ee JOWHAR
Jowhar (Caasimada Online) – Maamulka Degmada Jowhar ayaa ku fashilmay dayactir ay sheegeen in lagu sameeyay qaar kamid ah waddooyinka dhexmara xaafadaha magaalada Jowhar oo caasimad u ah maamulka Hirshabeelle.
Dayactirka Waddooyinka oo dhaqaalo badan loo qorsheeyay ayaa waxaanan si wanaagsan loo sameyn laamiyada ku yaala xaafadaha magaalada Gaar ahaan wadada hormarta agagaarka saldhiga iyo madaxtooyada Hirshabeelle.
Marka uu roob da’o waxaa xerma waddooyin badan oo xaafadaha magaalada Ku yaala iyadoo uusan jirin maamul isku xilsaaray dayactirka laamiyada burbursan ee bartamaha magaalada ku yaal.
Guddoomiyaha degmada Jowhar ayaa maalmo kahor kasoo muuqday sawiro muujinayo dayactir laamiga hormara saldhiga magaalada Jowhar lagu bilaabay, balse fashil ayaa yimid kadib markii maalmo kadib gaari marayay halkii la dayactiray uu rogman gaaray.
Gaariga oo waday xamuul ayaa halis galay, waxaana uu sii dheereeyay godada laamiga bubursanaa ee dhawaan la sheegay in la dayactiray, taasi oo fashil ku ah guddoomiyaha degmada oo dhawaan isaga dayactirka kasoo dhex muuqday.